Fiantsenana any Bali " Journey-Assist - Inona no tokony hoentina avy any Bali
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Fiantsenana any Bali
Fiantsenana ao Bali (endri-javatra)
Shops sy supermarket Bali
Inona no tokony hoentina any Bali
Inona no voarara ny manondrana!
Endrika fiantsenana ao Bali
Amin'ny faritra rehetra eto amin'ny nosy dia misy toeram-pivarotana lehibe, fivarotana miloko kely, ary koa ny baza miaraka amina entana isan-karazany. Eto ianao dia afaka mividy entana misy marika, firavaka tany am-boalohany, vokatra vita amin'ny lamba, lamba, hosodoko, sns. Ny vokatra atolotra any Bali dia avo lenta ary amin'ny fotoana tsy lafo, ka mpizahatany maro no mahazo tombony mividy eto.
Fitsipika iray manan-danja amin'ny fiantsenana eny an-tsena ny fivarotana matetika. Tsy misy mpivarotra milaza ny vidin'ny entana avy hatrany, ary ny vidiny voalaza voalohany dia tsy maintsy ampidinina. Ireo izay tsy zatra an'io matetika dia zatra tsikelikely. Rehefa dinihina tokoa, mahafinaritra ny mividy zavatra tsara tarehy amin'ny 40% amin'ny vidiny efa nambara tany am-boalohany. Raha misy tsy fahombiazana eo am-piandohan'ny fikarohana zavatra mahaliana dia tsy tokony ho sosotra ianao, satria misy fivarotana maro karazana any Bali, izay ahitanao ny zava-mahaliana rehetra amin'ny mpitsidika rehefa mandeha ny fotoana. Marihina fa ny fandoavambola tsy misy vola dia saika miasa amin'ny supermarket avokoa, koa mila manana vola miaraka aminao ianao.
Ny faritra fivarotana lehibe any Bali dia i Kuta, Ubud, Legian ary Sanur. I Ubud no tena atolotra indrindra.
Betsaka ny ivon-toeram-pivarotana sy fialamboly tena mendrika eto amin'ny nosy, mahazo aina sy manana alim-panafody. Ny tambajotra ivon-toeram-pivarotana mandroso no Matahari, misolo tena azy any Denpasar, Legian ary Kut.
Ireto tranokala manaraka ireto dia tena malaza amin'ny mpizahatany:
Mal "Bali Gallery" (Mal Bali Galeria)
fivarotana mpivarotra mivarotra fanatanjahantena, kiraro ary asa-tanana miavaka.
Mal "Bali Gallery" Mal Bali Galeria
Adidy maimaim-poana ao Denpasar (tsy eo amin'ny seranam-piaramanidina)
Toeram-pitondrana varotra maimaim-poana. Misy iray ao Denpasar, ohatra. ZAVA-DEHIBE! Izay ahatongavanao any dia tsy azon'ny tananao atao. Ary ho azonao eo amin'ny seranam-piaramanidina izany. Ary tsy misy zavatra hafa. Azonao atao ny mandoa ny entana amin'ny dolara. Izy ireo koa no fandoavam-bola mahasoa indrindra. Raha manapa-kevitra ny handoa amin'ny karatra ianao dia tadidio fa hampandoaviny vola ianao, izany hoe hisy fiovam-po.
Ivotoerana fivarotana lehibe ao Kuta, ao anatiny dia misy magazay marobe manokana izay natao indrindra ho an'ireo mpizahatany.
Ny toeram-pivarotana lehibe indrindra dia mendrika dinihina manokana.
Carrefour, Denpasar, Bali
Carrefour, Denpasar. Bali
Any Denpasar, ao amin'ny tranobe misy rihana 4. Ao amin'ny rihana voalohany dia misy mari-pahaizana lehibe amin'ny tambajotra iraisam-pirenena, izay mitondra ny anarana mitovy amin'ny foibe fivarotana manontolo. Amin'ny rihana faha-1 sy faha-2 misy boutika mivarotra marika iraisam-pirenena, ary koa toeram-pilalaovana sy kianja fitsakafo. Eo koa ny birao fifanakalozana, ny fivarotam-panafody, ny fitahirizana entana. Ny lazan'ny toeram-pivarotana dia noho ny fahafahana tsy hanandrana lovia mahazatra amin'ny mponina ao amin'ny CIS ihany, fa koa hividianana ny vokatra mahazatra any Eropa ao amin'ny tranombarotra. SEC Carrefour dia misy ao amin'ny afovoan'i Kuta resort (Sunset Road).
Lippo Mall Kuta, Kuta. Bali
Ity mall dia naorina tsy ela akory izay ary 200 metatra miala ny morontsiraky ny ranomasina no misy azy. Ankoatra ny fiantsenana sy ny tsakitsaky dia afaka mankany amin'ny sinema antsoina hoe "Century 21" ianao. Ny tena mampiavaka ny ivon-toeram-pivarotana dia lehibe ny boutiques mivarotra entam-panatanjahan-tena, kiraro ary fahatsiarovana. Ireo marika malaza eran'izao tontolo izao toa ny New Balance, Geox, Converse, Planet Sports, Giordano, L'occitane sy ny hafa dia soloana solontena. Betsaka ny sakafo haingana any amin'ny faritra fitsarana iray. Ny tsenambarotra dia eo amin'ny faran'ny atsimo amin'ny araben'i Kartika Plaza any Kuta. Ny trano dia mamarana ny arcade fiantsenana amin'ity arabe ity, izay misy fivarotana vokatra sy fahatsiarovana eo an-toerana.
Beachwalk, Kuta. Bali
Ity toeram-pivarotana ity dia miorina ao Kuta, trano misy rihana 3, izay voaravaka amin'ny fomba nentin-drazana Bali. Any akaikin'ny morontsirak'i Panta iKuta no misy azy. Misy ihany koa ny kiraro sy akanjo maro karazana, sakafo matsiro, sinema, amphiteater an-kalamanjana. Ny tena mampiavaka an'ity magazay ity dia marika marobe, manomboka amin'ny kilasy toekarena ka hatramin'ny kilasy premium.
Noho izany, ny fiantsenana tsara eto dia azo atao ho an'ireo mpiantsena manana karama samihafa. Marika malaza maro no soloina solontena eto: Zara, H&M, Bershka, Topshop, Mango, Victoria's Secret, sns.
Ity trano fivarotana ity dia misy trano fisakafoanana hazan-dranomasina Fish & Co, trano fisakafoanana steakhouse, trano fisakafoanana japoney Bushido ary confectionery Haagen-Dazs. Misy sakafo haingana any amin'ny rihana faha-3. Ny toeram-pivarotana dia eo afovoan'ny Kuta akaikin'ny morontsiraka lehibe. Izy io dia miaraka amin'ny toeram-piantsonana ambanin'ny tany midadasika. Eo amin'ny arabe misy io ivontoerana fiantsenana io dia iray lalana ny fifamoivoizana. Noho izany, raha tsy hitanao ny fihodinana any amin'ny toeram-pivarotana dia mila manao boribory be ianao.
Seminyak Square, Seminyak. Bali
Ity ivontoerana fiantsenana ity dia miorina ao amin'ny resort Seminyak ao amin'ny trano misy rihana 2. Ny teny hoe efamira (izany hoe "faritra") amin'ny lohateny dia tsy very maina. Misy bazary akaikin'ny tranobe lehibe, toerana amarotany akanjo fahavaratra, firavaka, fahatsiarovana ary kojakoja namboarin'ireo mpanao asa tanana teo an-toerana.
Toy ny toeram-pivarotana maro, misy koa ireo boutique mivarotra akanjo, ary koa firavaka sy fivarotana boky. Azonao atao ny mividy vokatra amin'ny marika Body & Soul, Quiksilver, DC Store ary Diga, sns. Amin'ny rihana voalohany dia misy fivarotam-panafody Guardian, izay, ankoatry ny zavatra hafa, dia manolotra kosmetika fikarakarana teti-bola amin'ny famokarana eo an-toerana (orinasa Bali Halus, Herborist, Utama Spice).
Ity toeram-pivarotana ity koa dia misy trano fisakafoanana manolotra sakafo eo an-toerana sy eropeana: Ny sakafo Braga Indoneziana, Casa Gourmet, Spizziko. Bali Bakery dia mpivaro-mofo ho an'ny mpitia vokatra lafarinina. Eo amin'ny arabe KayuAva no misy ny foibe fiantsenana. Misy ny fiantsonan'ny fiara be karama eo akaikin'ny trano.
Seminyak Village, Seminyak. Bali
Seminyak Village dia toeram-pivarotana lehibe iray, natsangana somary tara kely kokoa noho ny Kianja Seminyak, ary manodidina ny 200 m miala amin'ity farany.
Eto ianao afaka mahazo tombony amin'ny fividianana akanjo sy kiraro, makiazy makiazy ho an'ny volo sy ny vatana. Ahitana toeram-pisakafoanana an-tsakafo maro misakafo ao an-toerana sy sakafo haingana hafa. Ny fanamarihana manokana dia tokony hatao amin'ny mini-roti sy fivarotana kafe, izay mety mahaliana ny nify mamy.
Supermarket Pepito, Jimbaran, Kerobokan. Bali
Supermarket Pepito. Bali
Indonezy Indoneziana Indonezia amin'ny endrika kely. Eto ianao dia afaka mividy legioma vaovao, voankazo, vokatra hena, alikaola, fromazy, mofo, anisan'izany ny vahiny. Omena ihany koa ny entana ao an-trano, ny zavatra simika ao an-tokantrano, lovia. Misy mofo io. Ao amin'ny Jimbaran (amin'ny làlana RayaUluwatu), ao Kerobokan (amin'ny làlana Raya Kerobokan) sy any Ubud no misy ireo tsenan-tsambo eto Bali.
Supermarket Coco. Bali
Fivarotana fivarotana lehibe iray misolo tena ny any Bali any Nusa Dua sy Ubud. Manolotra entana isan-karazany izy io, ao anatin'izany ny legioma, voankazo, vokatra hena semi-vita, fitafiana, lovia, kojakojan-tokantrano, sakafo ho an'ny ankizy, vokatra vita amin'ny ronono.
Ny mpankafy kafe dia asaina manandrana ny gourmet Luwak sy zava-pisotro hafa ao an-toerana. Ho fanampin'ny safidy maro karazana vokatra sakafo dia misy ihany koa fahatsiarovana eto. Ao Ubud, ny tsenan'i Coco dia miorina eo amin'ny Hanoman Street, ary ao Nusa Dusa, ao amin'ny Resort Nusa Dua Resort.
Any Bali, dia maro ny tsena feno ny tsirony eo an-toerana. Azonao atao ny mividy maro amin'izy ireo, anisan'izany ny akanjo, ny kiraro, ny sakafo ary ny zavamaneno mozika ihany koa. Ny legioma, ny voankazo, ny hazan-dranomasina, ny zava-manitra dia hanintona ny gourmets tena manentana. Na any amin'ny tranoben'ny Bali aza, vokatra avo lenta amin'ny tompo ao an-toerana no omena. Ankoatr'izay, eto ianao dia afaka (na mila izany aza) ho mpiady.
Pasar Badung, Denpasar. Bali
Ao amin'ny Denpasar. Io no bara lehibe indrindra any an-tanàna, eo amin'ny làlana lehibe ao Denpasar. Tsenam-panjakofana miorina ao anaty tranobe misy rihana 4 io.
Mandritra izany fotoana izany, misy ny fizarana mazava tsara ny isa manisa ireo sokajy vokatra. Ny entana samy hafa dia amidy amin'ny gorodona samihafa sy amin'ny toerana samihafa amin'ilay tranobe.
Pasar Senggol, Denpasar. Indonezia
Fotoam-baravarana izao, izay malaza amin'ny vahiny sy eo an-toerana. Hita ao Denpasar ihany koa. Izy io dia manana vidiny mahaliana ho an'ny asa tanana, akanjo, legioma, voankazo, kojakoja kely ao an-tokantrano.
Pasa Amlapura, Amlapura. Bali
Ity bazaar ity dia hita ao amin'ny tanàna kely any Amlapura. Ny rivotra iainana eto dia tony sy tony, izay misy fiantraikany tsara amin'ny fihetsiky ny fialan-tsasatra.
Pasa Amlapura no bazaar lehibe any atsinanan'i Bali. Izy io dia manasongadina vokatra marobe.
I Ubud no ivon-asa lehibe manan-danja indrindra any Bali. Misy mpanao asa tanana mahay kokoa noho ny tanàna hafa eto amin'ny nosy, noho izany dia afaka mahita asa-tanana kanto be dia be ianao.
Tsenan'ny Ubud. Ubud. Bali
Ny tsenan'i Ubud dia ahitana kaonty am-polony maro izay manolotra souvenir, akanjo, lamba, lovia, ary maro hafa. et al.
Toerana malaza be ho an'ny mponina sy ny mpizahatany io toerana io. Ity bazaar ao amin'ny tanànan'ny Jimbaran ity no ivom-barotra lehibe indrindra amin'ny trondro. Eo akaikin'ny fivarotana tsena mivarotra hazan-dranomasina dia misy kafe sy trano fisakafoanana maro manolotra lovia trondro eny amoron-dranomasina.
Avy amin'ireo souvenir eto amin'ity nosy ity dia afaka mividy zavatra mahafinaritra toy ny fitazonana entana ianao:
Saribakoly saribakoly. Bali
izay natao eto tsy ho an'ny mpizahatany ihany. Ny tenany eo an-toerana no mampiasa azy ireo amin'ny fiainana andavanandro.
Amulet miaraka amin'ny mandala "Golden Runes". Bali
Sary an'ohatra, saron-tava, tarehimarika biby,
Vita avy amin'ny mena sy ny hazo fotsifotsy ary ny katany.
Sarivongana vita amin'ny hazo. Bali
Ny toerana malaza indrindra amin'ny fividianana vokatra vita amin'ny hazo toy izany dia ny vohitra mpandrafitra hazo malaza eran-tany - Mas (Desa Mas)
Drafitra fitaovam-piadiana mandringa
Antsy, sabatra, lefona, ampingany, tsipìka.
Chris. Bali. (Dummy)
Hazo vita amin'ny taolana sy taolana
Amin'izao fomba izao dia avela amin'ny taolan'ny omby ihany ny vokatra misy taolana. Na izany aza, aza mahazo elefanta, rany amin'ny taolana. Hatramin'ny any Bali, ny zavatra vidina, ny famarotana ny vokatra toy izany dia manasazy amin'ny lalàna!
Vokatra avy amin'ny taolana. Bali
Souvenir avy any Bali
Souvenir atao any Bali dia azo antoka fa tsy azo amidy na aiza na aiza. Izy ireo dia dia tany am-boalohany (mamaky bebe kokoa momba ny kolontsaina sy ny asa tanana any Bali eto)... Ny fanamboaran'izy ireo dia fahaiza-manao izay ampitain'ny ray amin'ny zanany hatramin'ny taloha. Ankoatr'izay, ny tanàna, na dia tanàna kely iray aza ao amin'ilay nosy, dia afaka mirehareha amin'ny fahatsiarovana azy manokana sy ny teknika famokarana azy ireo. Noho io antony io, raha manam-potoana sy faniriana ianao, dia misy dikany ny fitsidihana tanàna maro kokoa hijerena sy hividianana karazan-tanana vita tanana mahafinaritra, indrindra satria maro amin'izy ireo no amidy amin'ny vidiny ambany dia ambany.
Raha ny fividianana azo ampiharina kokoa (fa tsy souvenir) dia afaka mividy soa aman-tsara any Bali ianao:
Firavaka (avy amin'ny volamena, volafotsy ary masaka).
Lamba lamba vita tanana.
Akanjo sy kiraro marika.
Vokatra avy amin'ny valizy.
Sintona amin'ny fitaovana rehetra (kitay, volafotsy, tanimanga, sns).
VOA! Misy voankazo mahafinaritra any Bali, ny maro amin'izy ireo dia azo entina nody ho souvenir.
Vokatra hoditra (kiraro, kitapo).
Fananana, ao anatin'izany avy amin'ny hazo sarobidy na avy amin'ny volotsangana (raha hitondra azy ao an-trano ianao).
Voarara ny manondrana any Bali
Vokatra avy amina sy ny akorandriaka.
Vorona voafehy, biby.
Rakitry ny ela - sary hosodoko, boky taloha, sarivongana, firavaka sns zavatra manan-tantara na manan-talenta manokana amin'ny zava-kanto (azo atao ny mahazo mivoaka miaraka amin'ny alalana manokana).
Vola nasionaly (rupees Indonezianina) mihoatra ny 50.
Natonta tamin'ny teny sinoa.
Ny entana sy ny entana mihoatra ny 50 taona.
Biby (azo alaina miaraka amin'ny fahazoan-dàlana manokana sy ny fiadidiana ny biby).
Vokatra avy amin'ny ivoara.
Fasika sy tany.
Rehefa mitsidika tsena dia tsy maintsy miangona ianao. Ankoatr'izay, ny fahazoana mandeha dia tokony hifanaraka amin'ny tetika iray manokana: tsy maintsy ahena avy hatrany amin'ny vidin'ny fihenan'ny mpivarotra ianao in-4, ary avy eo afaka miakatra tsikelikely ny haavony. Tsy tokony hampihena kely fotsiny ny vidiny hatramin'ny voalohany, satria ny mpivarotra eo an-toerana dia mazàna amin'ny fifanarahana lehibe.
Rehefa mifidy fotoana hiantsenana dia aleo misoroka ny antoandro noho ny hafanana mafana.
Manelingelina be ny mpivarotra amoron-dalana sasany. Noho izany, tsy tokony hijery ny lalan'izy ireo ianao raha tsy hividy zavatra amin'izy ireo. Raha mbola nanapa-kevitra ny "hanao fahirano" anao ilay mpivarotra manelingelina dia azonao atao ny mandrahona ny polisy dia mandeha io matetika.
Tokony ho malina kokoa ianao rehefa mividy moto. Rehefa dinihina tokoa, dia mety hahita tranga sandoka ianao: amin'ny alàlan'ny sary an-tànana dia afaka mivarotra pirinty amin'ny lamba ianao.
Rehefa mividy antigne, azafady mariho fa ny entana fanondrana entana avy any Bali dia mihoatra ny 50 taona dia voarara.